Imidlalo yebhodi engu-60 ehamba phambili yabantu abadala | Nginike isikhathi sokuphumula
Isaka | 17/12/2021 17:48 | Kubuyekezwe ku- 20/12/2021 16:09 | General
Kusukela kwamenyezelwa ubhubhane lomhlaba wonke, imidlalo yebhodi yabantu abadala ukuthengisa kwabo kwenyukile. Isizathu siwukuthi, lapho ubhekene nemingcele nokwesaba abanye, yiluphi uhlelo olungcono noluphephile kunokuhlala ekhaya nomndeni noma abangani eduze kwetafula futhi uchithe izikhathi ezinhle kakhulu zokuhleka nokuncintisana udlala le midlalo ejabulisayo.
Nokho, ziningi kakhulu kangangokuthi ngezinye izikhathi kuba nzima ukwazi ukukhetha. Kulo mhlahlandlela ungaqonda kangcono konke okuhlobene nemidlalo yebhodi engcono kakhulu kubantu abadala, izinhlobo, kanye nezinketho ezahlukene okufanele uchithe izikhathi ezinhle kakhulu ekhaya ...
1 Imidlalo yebhodi yabadala ethengiswa kakhulu kunazo zonke
1.3 Iphathi & Co. Extreme 3.0
2 Ungakhetha kanjani umdlalo webhodi ongcono kakhulu wabantu abadala?
2.1 Imidlalo yebhodi ejabulisayo yabantu abadala
2.1.3 Isizwe sama-Scoundrels
2.1.5 Umdlalo webhodi phakathi kwabangane
2.1.6 Usula Uhlanya
2.2 Okwehlobo lomndeni i-Trivial
2.2.2 Mncane lowo othungayo
2.2.4 Ngubani ofuna ukuba usozigidi?
2.2.5 Dlulisa igama
2.2.7 Dlala ngesiko le-geek
2.3 Ukudlala nabangani
2.3.1 4-in-1 ithebula lemidlalo eminingi
2.3.3 Itafula le-ping pong
2.3.4 Isikhathi siphelile!
2.3.5 Ijubane lehlathi
2.3.7 Iphathi ye-EXIN
2.3.8 KuParrot Noma yebo noma cha Azikho izimfihlo
2.4.1 Iziboshwa & Dragons
2.4.2 Ukulandelana kukaGoliyati
2.4.4 Isizwe samaSkhohlakali Masiqhubeke sisona
2.5 Imidlalo yebhodi yababili
2.5.2 4 emgqeni
2.5.3 (Un) engibaziyo?
2.5.5 I-Devir Secret Code Duo
2.6 Amageyimu ebhodi yamasu
2.6.2 UDevir Carcassonne
2.6.3 Ingozi ye-Hasbro
2.6.4 Isu Lokuklama
2.6.5 I-Classic Monopoly
2.7 Imidlalo engcono kakhulu yokubambisana
2.7.2 UDevir Holmes
2.7.3 I-Devir The Forbidden Island
2.8.1 Iphazili elingu-2000
2.8.2 Pirate umkhumbi 3D puzzle
2.8.5 UNO umndeni
2.8.7 Chess board, oshekhasi kanye backgammon
2.8.8 Ibhodi leParcheesi + OCA
2.9 Isizukulwane esisha
2.9.1 Imidlalo yebhodi ye-inthanethi nezinhlelo zokusebenza
2.9.2 Imidlalo engokoqobo engathandwayo
3 Imibuzo ebuzwa njalo
3.1 Iyini imidlalo yebhodi yabantu abadala?
3.2 Kungani uthenga lolu hlobo lokuzijabulisa?
3.3 Ungazithenga kuphi?
Imidlalo yebhodi yabadala ethengiswa kakhulu kunazo zonke
Kukhona inani elikhulu, imidlalo yebhodi engcono kakhulu yabantu abadalaZombili ezakudala ezidayisiwe isizukulwane ngesizukulwane, kanye nezamanje kakhulu. Nokho, ungakwazi uzivumele ukuqondiswa uhlu Abathengisi abahamba phambili kusukela eqinisweni. Bangabathengisi abaphezulu futhi, uma bethengisa kakhulu ... kungenxa yokuthi banokuthile okukhethekile:
I-GUATAFAC - Umdlalo we ...
Ingabe uzoba nephathi noma umhlangano nomndeni noma abangani? Ingabe udinga ukuhleka okuqinisekisiwe? Khona-ke lo mdlalo webhodi wabantu abadala yilokho obukufuna. Yakhelwe abantu abangaphezu kweminyaka engu-16 ubudala. Unemizuzwana engu-8 ukuqagela imicabango eyinqaba kakhulu yomndeni wakho nabangane. Amahlaya amnyama namahlaya angcolile aqoqwe ngezinhlamvu ezingama-400 ezinemibuzo kanye nezinhlamvu ezikhethekile ezingama-80.
ISIZWE SINVERGUENZAS ...
Omunye umdlalo webhodi ongcono kakhulu wabantu abadala. Inezinselelo zazo zonke izinhlobo, zonke zilayishe amahlaya ukuze kuqhume uhleko. Ngemibuzo engenangqondo neze ehlekisayo. Perfect ukuzinika isipho noma ukunikeza obathandayo. Yebo, ingeyabantu abangaphezu kweminyaka eyi-18 ...
Iphathi & Co. Extreme 3.0
I-Diset - Iphathi & Co ...
Ukuthi iphakathi kwabathengisi abahamba phambili akusona isimanga. Ungadlala ngamaqembu, ngezivivinyo ezihlukene eziyi-12 nezigaba ezi-4. Ngokuhlolwa kokudweba, imibuzo, ukulingisa, ukulingisa, njll. Okunye kwalokhu okukodwa okungasoze kwakubhora kungakhathaliseki ukuthi udlala kangakanani, futhi lokho kuzokwenza wonke umuntu abe nesikhathi esihle sokudlala.
I-CORROTO- Umdlalo we ...
Umdlalo wamakhadi onesibindi onamakhadi angaphezu kuka-600 ukuze ube namahora angafika kwangu-234 okuhleka okuqinisekisiwe. Umdlalo wabantu abadala lapho kuxutshwe khona izimo ezivusa inkanuko, ezinesibindi, amahlaya amnyama, no-0% wezimiso zokuziphatha. Noma yini ihamba ihleka ingayeki. Kulokhu, umdlali ngamunye unamakhadi amhlophe ayi-11 (izimpendulo), futhi umdlali ongahleliwe ufunda ikhadi eliluhlaza okwesibhakabhaka elinendawo engenalutho. Ngale ndlela, umdlali ngamunye ukhetha ikhadi elihlekisayo analo ukuze aqedele umusho.
Ungakhetha kanjani umdlalo webhodi ongcono kakhulu wabantu abadala?
Ngesikhathi sika khetha umdlalo webhodi ongcono kakhulu wabantu abadala Ukungabaza kungase kuphakame, futhi akubona bonke abathanda izingqikithi ezifanayo namafomethi wegeyimu. Kukhona ezamaqembu ahlukene, kusukela kwathile kuya kumalungu omndeni, amanye afaneleka kakhulu amaqembu abangani ngenxa yokuqukethwe kwawo noma itimu, futhi amanye aqondile ngokohlobo lomdlalo okukhulunywa ngawo. Ngakho-ke, kufanele wazi izigaba ezihlukene ezifunwa kakhulu:
Imidlalo yebhodi ejabulisayo yabantu abadala
Kukhona imidlalo yebhodi yabantu abadala egqamayo ikakhulukazi ngokuhleka abakwenzayo, leyo ehlekisayo lapho noma ubani ezogcina enokuhleka okuhlanzekile. Lezo ezikubeka ezimeni ezihlekisayo, noma ezikwenza ukhiphe umoya wakho wamahlaya. Lezo ezikwenza uchithe ubusuku obungenakulibaleka nabathandekayo bakho ezizohlala zisenkumbulweni. Okuhlekisayo kakhulu kuzo zonke yilezi:
Uma uhlangabezana nayo, kuzoba ngomunye waleyo midlalo yebhodi yokulingisa ezoba phakathi kwezintandokazi zakho. Idizayinelwe umndeni noma abangani, ngokuhleka okuqinisekiswe ngokugcwele kanye nokuthinta isu, amazinga ahlukene, izigaba, kanye nenjongo yokuthola uhlobo olulodwa lwekhadi ukuthi liwine.
I-Glop Pinta - Imidlalo ye ...
Kungaba enye indlela enhle kuneyangaphambili, noma umphelelisi ophelele, ngoba futhi yakhelwe lezo zikhathi nomndeni noma abangani lapho udinga ukuzijabulisa nokuzijabulisa okuthile. Kodwa, ngokungafani neyangaphambili, imayelana nokudweba nokuqagela.
Igeyimu emnandi Eyenziwe E-Spain, esekelwe emakhadini futhi elungele ukuhleka nabangani. Ngokuthinta i-hooligan, kuzodingeka umangalele futhi bazokubeka icala, ngaphezu kokuzithoba ekuhlolweni okungenangqondo nokuhlanganyela ezinselele zenhlalo ongakaze uzicabange. Umdlalo owazi kuwo ukuthi uqala kanjani, kepha awazi ukuthi uphetha kanjani ...
Umdlalo ojabulisayo wayo yonke iminyaka kanye nama-duels angu-120 ahlukile okwenza ubuso nobuso futhi ubonise amandla akho engqondo, ngokomzimba, isibindi, ikhono, noma inhlanhla. Ama-duels asheshayo futhi ajabulisa kakhulu, futhi lapho abanye abadlali bezosebenza njengamajaji ukuze banqume ukuthi ubani owinile.
Umdlalo webhodi phakathi kwabangane
😈 Abangane🤣 -Umdlalo ...
Ilungele imibuthano yabangane, amaphathi e-bachelorette noma ama-bachelorette, njll. Uhleko namavayibhu amahle sibonga imibuzo ezinikele ozobuzwa futhi uhanjiswe kuyo. Uzolahlekelwa yiwo wonke amahloni ngezinselelo nemibuzo ephakathi kwamakhadi ...
Thenga umdlalo weBhodi phakathi kwabangane
Enye indlela enhle yephathi, eyenzelwe wonke umndeni nabangane, kusukela kwabaneminyaka eyi-8. Igeyimu ejabulisa kakhulu ehlanganisa uhlolo lwazo zonke izinhlobo, njengokulalela, ukudweba, ukulingisa, izinsolo ezingenangqondo, nomsangano wokugcina omkhulu. Owokuqala ukuthola wonke ama-loci ama-5 uzowina umqhele weNkosi yeziwula ...
I-Hasbro Gaming- TABOO ...
Ayidingi izethulo, iyi-classic. Kuwo wonke umuntu, ngenhloso yokunikeza izinkomba ngaphandle kokusebenzisa amagama anqatshelwe. Ngokuqukethwe okubuyekeziwe namagama afika ku-1000 nezindlela ezi-5 zokudlala ezihlukene. Uma umfana wase-altare kanye no-Xavier Deltell babe nesikhathi esinzima esihlalweni samajaqamba ohlelweni lwe-Me slips, manje usungakwazi ukuzwelana nabo ...
Hasbro - Jenga Vuselela ...
I-Mega Hi-Tower Eskhwameni -...
Enye yakudala phakathi kweyakudala, elula, elula ukuyidlala, yazo zonke izethameli, nokujabulisayo. Iwumbhoshongo owakhiwe ngamabhuloki enziwe ngokhuni okuzodingeka nishintshane nizame ukungawi. Akukhona kuphela ngokususa ucezu lwakho, kodwa mayelana nokuzama ukwenza isakhiwo singazinzi ngangokunokwenzeka ukuze ophikisana naye omthintayo ekujikeni okulandelayo abe yinkimbinkimbi kakhulu.
Thenga uJenga Thenga i-Giant Jenga
Okwehlobo lomndeni i-Trivial
Uma uthanda imidlalo yebhodi yohlobo lomndeni i-Trivial, ngemibuzo nokuthi ungabonisa kuphi izipho zobuhlakani namasiko ziyisisekelo, khona-ke kufanele ubheke lokhu okunye okukhethiwe. Lapha uzobona izindatshana ezinhloso yazo kuwukuvuza owazi kakhulu:
I-Hasbro Gaming Trivial ...
Yiqiniso, phakathi kwemidlalo ye-trivia, i-Trivial ngokwayo ayikwazi ukungabi khona. Igeyimu ye-trivia yesiko elijwayelekile enezigaba ezahlukene lapho uzozama khona ukuphendula kahle yonke imibuzo futhi uthole zonke izingcezu zikashizi ngaphambi kwanoma ubani omunye.
Thenga Trivial Pursuit
Mncane lowo othungayo
I-Eleven Force LQSA Trivial ...
Uma ungumlandeli we-La que se avecina, usenhlanhleni, njengoba kunemidlalo yebhodi efana ne-Trivial enenqwaba yezindikimba (Harry Potter, Star Wars, Dragon Ball, The Lord of the Rings, The Big Bang Theory ...), phakathi kwabo futhi uchungechunge lweSpanishi LQSA. Ucabanga ukuthi ubazi kahle abalingiswa bayo kanye nazo zonke izimfihlo zochungechunge? Zihlole...
Thenga i-Trivial LQSA
UGoliyathi - Impama, Umdlalo we ...
Omunye umdlalo we-trivia womndeni wonke, kusukela eminyakeni engu-8. Ibhodi, amakhadi angama-50 anemibuzo engama-500, nobuhlakani bakho bokuphendula ngendlela efanele futhi uthole amaphuzu. Yilokho okuguquguqukayo, kodwa qaphela ... imibuzo igcwele izicupho, futhi ngezinye izikhathi ukuhlakanipha kungcono kunejubane.
Ngubani ofuna ukuba usozigidi?
I-Ravensburger 26273 Chi ...
Abantu abasuka eminyakeni eyi-12 bangadlala, futhi ngabadlali abangu-2 noma ngaphezulu. Lo mdlalo webhodi wabantu abadala usekelwe kumbuzo kamabonakude odumile onegama elifanayo. Kuzodingeka uphendule imibuzo, futhi uzoba nochungechunge lwamahlaya lapho ukukhetha kuba nzima. Izimpendulo eziningi zokukhetha zinikezwa kuwe, futhi kuzodingeka ukhethe elungile, wandise izinga lobunzima isikhathi ngasinye.
Thenga Ubani ofuna ukuba usozigidi?
Famogames- Iphasiwedi ...
Umdlalo webhodi womndeni wonke osuselwe kumbuzo kamabonakude. Kuzodingeka uhlole ulwazi lwakho ezivivinyweni eziyisi-6 ezihlukene, ngemibuzo engaphezu kuka-10.000 kanye ne-rosco yokugcina ukuze uzame ukuqagela amagama amaningi ngaphambi kokuphela kwesikhathi.
I-Hasbro Gaming -...
Omunye wemidlalo ehlekisayo laphaya, futhi olula, kodwa ozobeka umcabango wakho, ubuhlakani kanye nesilulumagama esivivinyweni. Ku-Scattergories uzokwazi ukudlala abadlali aba-2 kuye kwabayisi-6, abaneminyaka engu-13 ubudala, futhi lapho kuzodingeka uthole amagama esigaba futhi aqala ngohlamvu oluthile.
Dlala ngesiko le-geek
Dlala ngesiko le-geek ...
Isihloko sayo yonke iminyaka kanye nesabalandeli bomhlaba wobuchwepheshe, i-inthanethi, imidlalo yevidiyo, izinganekwane zesayensi namaqhawe amakhulu. Okusho ukuthi, ama-geeks. Ngakho ungahlola ulwazi lwakho noma olwabangani bakho kuzo zonke lezi zihloko.
Ukudlala njengomndeni akufani nokwenza naba ngani, lapho umkhathi uhluke kancane. Amnandi kakhulu, anokuqukethwe okungabandakanya ukukubonisa ukuthi uvamise ukuzibonakalisa kanjani kubangani kuphela, noma ezingawulungele wonke umndeni. Ngalezo zikhathi nabangani bakho abakhulu, izihloko ezihamba phambili ongazithola yilezi:
4-in-1 ithebula lemidlalo eminingi
Ithebula le-Leomark Multigame ...
Leli thebula lemidlalo eminingi lilungele ukudlala nabangani. Inemidlalo emi-4 etafuleni elilodwa, njengamabhiliyade, i-foosball, i-ping pong, nehokhi. Ngezinto zekhwalithi ezifana nezinkuni, isakhiwo esiqinile, ubukhulu bebhodi le-120 × 61 cm no-82 cm ukuphakama. Ihlanganiswe ngokushesha futhi kalula futhi inekhwalithi yaseYurophu nezitifiketi zokuphepha.
Ibhola letafula lekhwalithi, ngokhuni lwe-MDF olunogqinsi oluyi-15 mm. Ubukhulu buyi-121x101x79 cm. Ngemilenze ezinzile futhi ukuphakama-adjustable. Kufaka phakathi imininingwane efana nekhawunta yegoli, enezibambo zensimbi nezibambo zenjoloba ezingasheleli, imifanekiso ependiwe, nezibambi zenkomishi ezingu-2. Amabhola amabili kanye nemiyalelo yokuwafaka kufakiwe.
Itafula le-ping pong
I-Dione S500o - Ithebula ...
Ukugoqa ithebula le-ping pong ukuze lingathathi isikhala, lilungele ngaphakathi nangaphandle, njengoba limelana nezinto. Ngebhodi eliqinile elinobuso obungama-274 × 152.5 × 76 cm. Ihlanganisa amasondo angu-8 ukuze ikwazi ukuyijika noma ukuyihambisa kalula, kanye nebhuleki ukuyivimbela ukuthi inganyakazi ngesikhathi somdlalo. Amabhola egeyimu nama-paddles awafakiwe, kodwa ungawathenga ngokwehlukana:
Thenga itafula le-ping pong
Thenga isethi yamafosholo namabhola
Ukukhiqizwa kwe-Repos- Isikhathi ...
Umdlalo ophelele wabangane lapho kuzodingeka uqagele khona umlingiswa. Kungaba abantu bangempela noma abaqanjiwe abadumile, futhi konke sibonga izincazelo ezinikezwa umlingiswa ngamunye ngaphandle kokuziqamba. Ukuthi emzuliswaneni wokuqala, emzuliswaneni olandelayo izinga liyakhuphuka futhi kufanele bashaye igama elilodwa nje vo. Emzuliswaneni wesithathu, ukulingisa kuphela okuvumelekile.
Thenga Isikhathi siphelile!
I-Zygomatic - Isivinini seJungle...
Umdlalo wamakhadi onemidlalo emincane ehlukahlukene. Ifanele ubudala obungu-7 nangaphezulu. Kufanele uthole amakhadi anophawu olufanayo nolwakho bese ubamba i-totem. Ngezimpawu ezingaphezu kuka-50 namakhadi ahlukene angama-55. Isivinini, ukuqaphela kanye nokukhalipha kuyoba ukhiye.
Thenga i-Jungle Speed
I-TENGO DUO - Okusha ...
Umdlalo webhodi ojabulisayo lapho udlala khona amakhadi futhi kufanele ubambisane. Ukulindela, uzwela nabangani bakho, kanye nesivinini kuzokuholela ekunqobeni. Umdlali ngamunye kufanele azame ukuqagela izimpendulo ezinikezwe abanye abadlali kuyilapho abanye bezama ukuqagela ezabo.
I-EXIN Fiesta - Umdlalo we ...
Kuyibhokisi elina-3 koku-1. Uzothola umdlalo wombulali, lapho abadlali abangenacala kufanele bathole ukuthi ubani umbulali womshoshaphansi, omunye umdlalo weqembu, lapho kufanele uqagele amagama amaningi ngangokunokwenzeka ulandela imithetho yomjikelezo ngamunye (incazelo , ukulingisa, ukudweba, umsindo), kanye nomdlalo wejubane, ozama ukuphendula amakhadi amaningi ngangokunokwenzeka emzuzwini ongu-1 neqembu lakho.
Thenga i-EXIN Fiesta
KuParrot Noma yebo noma cha Azikho izimfihlo
Imidlalo ye-Al Loro - Ni Si Ni ...
Umdlalo webhodi wabantu abadala olungele amaphathi nabangane. Iqukethe ukuphendula imibuzo eyi-10 elungiselelwe kanye nebabayo ngaphandle kokuthi Yebo noma Cha. Abantu abangu-2 noma abaningi ngendlela ofuna ngayo abangadlala. Indlela yokuxhumana nabanye abantu osanda kuhlangana nabo noma ezinkundleni zokuxhumana ukuze uthole iziphuzo.
Thenga Noma ngabe yebo noma cha
Kukhona nezinye imidlalo yebhodi yentsha, enomoya omusha nowesimanjemanje oqondiswe ezizukulwaneni ezintsha. Imikhiqizo enamajagoni entsha, enamatimu akhethekile aleli qembu lobudala, noma asho ulwazi lobuchwepheshe obusha, amathrendi, njll. Ezinye izibonelo zalokhu yilezi:
Iziboshwa & Dragons
I-Dungeons & Dragons Box ...
Ungomunye wemidlalo ethandwa kakhulu. Ama-Dragons kanye nemigodi sekudume kakhulu ngemuva kochungechunge lwe-The Big Bang Theory, njengoba abalingiswa bayo babedlala. Omunye wemidlalo yebhodi engcono kakhulu uma uthanda umcabango kanye nefantasy. Igeyimu yokuxoxa indaba lapho abadlali kumele bangene shi kuzo zonke izinhlobo zohambo oluyingqophamlando, kusukela ekuhloleni ama-maze, ukuya ekuphanga amagugu, ukulwa nezilo ezidumile, njll.
Thenga ibhokisi lokuqala le-D&D
Thenga i-D&D Essential Kit
Ibhodi legeyimu kaGoliyathi,...
Umdlalo ohlanganisa eminye imidlalo ibe munye. Kuwuhlobo lwesu, futhi kufanele ufunde ukuvimba izimbangi zakho futhi ususe izingcezu zabo ebhodini ngaphambi kokuba bakwenze nawe. Ungadlala uwedwa noma ngomfelandawonye. Uzobona ukuthi kubukeka njengamathathu emgqeni, nakuba kulokhu kufanele ubeke ama-chips angu-5 ombala ofanayo ngokuvundlile, mpo noma ngokuphambeneyo, kodwa kuye ngokuthi amakhadi akuthinte esandleni sakho, njengokungathi i-poker.
Isihloko esijabulisayo, esishukumisayo nesentsha lapho uzoba khona isiguli esikhungweni sezifo zengqondo esikholelwa okuthile noma isilwane, ngemidlalo yamasekhondi angu-90 lapho abadlali bengakwazi ukukhuluma, kodwa ngokuthinta komzimba kufanele benze abanye bazi ukuthi kuyini. Bangakwazi ukudlala oku-2 noma ngaphezulu, futhi kufanelekile iminyaka engaphezu kwengu-8. Kodwa qaphela, njengoba "udokotela" ungamvumeli udokotela ukuthi abone ukuthi uyini, ngoba nguye yedwa weqembu ongafani ne "chota".
Isizwe samaSkhohlakali Masiqhubeke sisona
Isizwe sama-Scoundrels ...
Esinye isihloko kulolu chungechunge lwemidlalo yebhodi yaseSpain. Omunye waleyo midlalo eyizixhwanguxhwangu futhi enohleko oluqinisekisiwe. Qoqa ozakwenu, shova amakhadi, bese uqala ngelokuqala. Kunezinhlobo ezi-4 zamakhadi amasha, izinsolo, inselelo yomphakathi, i-WTF! Imibuzo namakhadi angenalutho ukuze uqhamuke nalokho okufunayo.
Thenga Siqhubeke sisona
Imidlalo yebhodi yababili
I-Los imidlalo yebhodi ezimbili Ziyi-classic, futhi ziningi zazo. Ukudlala njengombhangqwana we-de facto, noma yiluphi olunye uhlobo lombhangqwana. Iphelele lapho abantu abaningi bengakwazi ukuhlangana futhi akwenzeki ukusebenzisa amanye amabhodi ngokuvamile adinga amaqembu amakhulu noma amaqembu. Imidlalo yebhodi engcono kakhulu yabantu abadala yalolu hlobo yile:
UBilliard Harmony ...
Ukuba netafula le-pool endlini ngaphandle kwesikhala esiningi kakhulu akunakwenzeka ngaso sonke isikhathi, kodwa ngaleli tafula lokudlela eliphenduka libe yibhilidi. Ukusebenza nobumnandi kuyahlangana kuleli thebula eliguqulekayo elikala 206.5 x 116.5 x 80 cm ubude, ububanzi nobude. Ihlanganisa zonke izesekeli zokudlala futhi ingakhethwa nge-tapestry ngemibala ehlukahlukene.
I-Falomir - Indawo yesi-4 Umdlalo ...
Ama-chips emibala emibili, abahlanganyeli ababili. Umqondo uwukufaka kuphaneli ukuze uzame ukudala imigqa engu-4 emugqeni wombala wakho ofanayo. Umphikisi kufanele enze okufanayo, ngenkathi ekuvimbile ukuze ungakutholi ngaphambili.
Thenga 4 Online
(Un) engibaziyo? –...
Akuwona nje umdlalo webhodi wabantu abadala abangu-2, kodwa ukhethekile kwabashadile. Kuyo uzokwazi ukuhlola okwaziyo ngomlingani wakho, ngemibuzo mayelana nempilo yansuku zonke, ubuntu, ukusondelana, okuthandwa nguwe, njll. Khetha incwadi enombuzo, votela impendulo ekufanele, bese ucela omunye umuntu ukuthi aphendule ukuze ubone ukuthi iyahambisana yini ...
Thenga (Un) abantu obajwayele?
Omunye umdlalo webhodi owenzelwe imibhangqwana. Ngalo uzokwazi ukuqinisa izibopho futhi ukusize ukuba wazi kangcono umbhangqwana, ngisho nasezimfihlo ezijulile. Kulula ukudlala, kunamakhadi ayi-100 anemibuzo eklanyelwe ukuholela engxoxweni mayelana nesikhathi esedlule, ikusasa, imizwa, imali, izifiso, ukusondelana, njll.
I-Devir Secret Code Duo
Kungumdlalo wokusebenzisana, ukufunda nokuzijabulisa. Ikuvumela ukuthi udlale ukuze ube osheshayo futhi ohlakaniphe kakhulu ukuze uthole izinkomba ezicashile nezingaqondakali futhi ungene ezicathulweni zenhloli eyimfihlo ukuze uthole okufihliwe futhi ngaleyo ndlela uwine umdlalo ngaphambi kokuthi umphikisi wakho enze.
I-Hasbro Gaming- Sink The ...
Igeyimu ye-naval odlala kuyo nezixhumanisi ukuze uzame ukucwilisa imikhumbi yezimbangi zakho. Bazobe bebekwe ezikhundleni azikhethile, futhi ngeke ubabone futhi akaboni nezakho. Idlalwa iyimpumputhe, futhi izama ukuthola lapho bekhona ukuze ibaqede. Ngaphandle kokungabaza enye yama-classics amabili ...
Thenga Sink the Fleet
Umdlalo we-ARTAGIA Umnandi futhi ...
Umdlalo okhethekile ojabulisayo wezithandani lapho ungathuthukisa khona ukuzethemba, ulinge ngezingxoxo ezihlekisayo, ukudlala ngothando, njll. Khetha ikhadi, phendula umbuzo, noma wenze inselele yothando ehlongozwayo. Uyalokotha?
Abalandeli bamaqhinga abafuna ukuyeka i-Warcraft, Age of Empires, Imperium, njll., futhi bashintshele kumidlalo ye-tabletop bazojatshuliswa izihloko ezifana nalezi:
I-Devir - Catan, umdlalo we ...
Umdlalo wamasu owine umklomelo, futhi osenabadlali abangaphezu kwezigidi ezimbili. Kudingeka ukunakwa nokuba ngusomaqhinga omuhle ukuze uwine. Inconyelwe ubudala obungu-2 nangaphezulu nabadlali abangu-10 noma 3. Kuyo uzoba omunye wabahlali bokuqala esiqhingini saseCatan, futhi amadolobha okuqala kanye nengqalasizinda kuzoqala ukuvela. Kancane kancane uzoguquka, amadolobha aguqulwa abe amadolobha, izindlela zokuhamba nezohwebo ziyathuthukiswa, izindlela zokuxhaphaza izinsiza, njll.
I-Devir BGCARPLUS3 -...
Omunye wemidlalo yamasu ehamba phambili futhi ethuthuke kakhulu. Kuhlanganisa ibhodi enezandiso ezingaba khona ukuze kwengezwe amathuba amaningi nokuqukethwe. Ilungele abadlali abangu-2 kuya ku-5, futhi ilungele ubudala obungu-7 nangaphezulu. Bangaphezu kwezigidi eziyi-10 abadlali ababanjiswe kulo mdlalo lapho kuzofanela wandise indawo yakho, ulwe, futhi unqobe izinto ezintsha.
Enye yezinkulu zesu lapho ukunqotshwa kombuso wakho kunqoba. Ngezibalo ezingama-300, amakhadi emishini, anemishini eyimfihlo eyi-12, nebhodi lokubeka amasosha akho futhi alwe ezimpini ezimangalisayo. Umdlalo ogcwele imifelandawonye, ​​ukuhlasela kungazelelwe, nokukhaphela.
Iminyaka engu-8 nangaphezulu nangaphezulu kubadlali abangu-2, i-Sttego ingenye yemidlalo yebhodi yamasu engcono kakhulu yabantu abadala. Ibhodi lakudala lapho ungakwazi ukuhlasela futhi uzivikele ukuze uzame ukunqoba ifulegi lesitha, okungukuthi, uhlobo lwe-CTF. Ngezicucu ezingu-40 zebutho lezikhundla ezahlukene ezizokwazi ukuhlola ukucabanga kwakho okunengqondo namasu.
I-Monopoly - Yakudala, Yakudala ...
Kunezinguqulo ezimbalwa ze-Monopoly, kodwa enye yezindlela eziphumelela kakhulu kuseyiyo yakudala. Nakuba kungewona umdlalo wamasu ongawusebenzisa, udinga ukuhlakanipha okuthile futhi ukwazi ukuphatha ukwazi ukuthenga nokuthengisa ukuze uzuze umbuso womcebo.
Imidlalo engcono kakhulu yokubambisana
Ngokuqondene ne imidlalo yebhodi yokubambisanaUkuze udlale ngemifelandawonye, ​​izihloko ezihamba phambili ongazithenga sezivele:
Umdlalo webhodi wayo yonke iminyaka kusukela eminyakeni eyi-8. Kungumdlalo wokusebenzisana lapho kufanele uzame ukuxazulula imfihlakalo, futhi bonke abadlali bazowina noma bahlulwe ndawonye. Inhloso ukuthola ukuthi yini elele ngemuva kokufa komoya wendlu eyisithabathaba futhi enze umphefumulo wakhe uphumule ngokuthula. Umdlali oyedwa uthatha indima yesipoki, futhi bonke abanye abadlali badlala nabadlali abazothola uchungechunge lwezinkomba ezikhomba imfihlo ...
Lo mdlalo ukuyisa kuFebhuwari 24, 1895, eLondon. Kuqhume ibhomu ePhalamende kanti uSherlock Holmes, kanye nomsizi wakhe, bazongenela ukuze bathole iqiniso ngaleli cala.
I-Devir The Forbidden Island
Umdlalo wokubambisana womndeni owine umklomelo. Kuyo uzicwilisa esikhumbeni sabahambi okufanele babuyise amagugu esiqhingi esingaqondakali. Ingadlalwa kusukela eminyakeni engu-10. Hlanganisa amakhadi kanye nezibalo zebhodi ukuze uzame ukugwema izingozi futhi uthole ingcebo.
Lo mdlalo wokubambisana ulungele abadlali aba-2 kuya kwaba-4, abaneminyaka eyi-14 noma ngaphezulu, futhi okufanele uzame ukusindisa isintu kubhubhane. Izifo nezinambuzane ezisabalele zibulala izimpilo eziningi, futhi kufanele uthole ikhambi. Ukwenza lokhu, bazohamba emhlabeni wonke befuna izinsiza ezidingekayo zokuhlanganisa ikhambi ...
Futhi i abadala Bangaba nesikhathi esihle sokudlala inqwaba yemidlalo yebhodi, iminyaka «Abadala» eyengeziwe. Ezinye sezivele zingakudala, futhi eziqhubeka nokuvusa isithakazelo kuleli qembu lobudala, ezinye zintsha kancane, okungenani ezweni lakithi, njengoba zingenisiwe zivela kwezinye izindawo emhlabeni. Izihloko okufanele zicatshangelwe ezingeke zishode yilezi:
I-Educa - Izimpawu ze...
Iphazili yabantu abadala, enezingcezu ezingu-2000, kanye nesithombe esihle sezimpawu zase-Europe. Iphazili, uma isihlanganisiwe, inobukhulu obungu-96 × 68 cm. Ama-chips ayo asezingeni eliphezulu futhi alingana kahle, ngaphezu kwalokho enziwe ngezinto ezivikela imvelo. Ifanele ukudlala nezingane ezineminyaka engu-12 ubudala, abadala nangaphezulu.
Thenga i-Puzzle yabantu abadala
Pirate umkhumbi 3D puzzle
I-CubicFun Puzzle 3D LED ...
Iphazili ye-3D emnandi yokwakha umkhumbi wezigebengu ezinhle. Yenziwe ngegwebu le-EPS elingazweli, enezingcezu ezingu-340 zokwakha umfanekiso we-Queen Anne's Revenge esikalini, enobukhulu obungu-68x25x64 cm. Uma isihlanganisiwe, inesistimu yokukhanyisa i-LED enamalambu angu-15 asebenza ngamabhethri angu-2 AA. Ifanele ubudala obungu-14 nangaphezulu.
Okwakudala phakathi kwakudala kanye nowomndeni wonke, nakuba ikakhulukazi kucatshangelwe abadala. Ihlanganisa isigubhu sebhesi esizenzakalelayo, amabhola anezinombolo, kanye nekhithi yamakhadi azodlalwa. Noma ubani othola umugqa kanye nebhingo kuqala, uyawina.
Amakhadi anenhlanganisela yezinombolo okufanele uzixube, usabalalise phakathi kwabahlanganyeli, futhi kancane kancane uqondanise izinombolo. Oyobeka kuqala wonke ama-chips akhe uzowina.
I-Mattel Games UNO Original ...
Umdlalo wamakhadi ojwayelekile nowesiko ovumela abadlali abangu-2 ukuthi badlale ngabanye noma ngamaqembu. Inhloso wukuba ngowokuqala ukuphelelwa amakhadi. Futhi uma ususele nekhadi elilodwa kuphela, ungakhohlwa ukumemeza uthi UNO!
I-Lewpox Tic Tac - Umdlalo we ...
Umdlalo ojwayelekile we-tic-tac-toe, wokuzama ukubeka umumo olinganayo ongu-3 emugqeni, ngokuvundlile, uqonde noma ngokudayagonali. Futhi zama ukuvimba umphikisi wakho ukuze angakutholi ngaphambili.
Thenga ezi-3 zilandelana
Chess board, oshekhasi kanye backgammon
I-Peradix Chess ...
Ibhodi labangu-3-in-1 lokudlala le midlalo emithathu yakudala engadingi singeniso. Nakuba ingase ilungele abantu asebekhulile, iyimidlalo engenabudala, ngakho izingane nazo zingadlala.
Ibhodi leParcheesi + OCA
I-Fournier Parchis ne-Goose ...
Umdlalo we-OCA neParcheesi ungomunye wemidlalo edume kakhulu yaso sonke isikhathi. Ngaleli bhodi elibuyiseleka emuva ungaba nayo yomibili imidlalo yokuzijabulisa komndeni.
I-Fournier F20991 - Idekhi ...
I-Fournier- Nº 505 Deck ...
Yiqiniso, phakathi kwama-classics awukwazi ukuphuthelwa imidlalo yetafula lekhadi. Ngedekhi yaseSpain noma ngedekhi yesiFulentshi, njengoba uthanda. Uzokwazi ukudlala izinhlobo eziningi zemidlalo, njengoba ngedekhi efanayo miningi (Uno, Pócker, Chinchón, Cinquillo, Mus, Solitaire, Blackjack, 7 nohhafu, Briscola, Burro,…).
Thenga ideski yeSpanishi Thenga indawo ye-poker
Yiqiniso, lesi esinye isigaba asikwazanga ukuphuthelwa, esisanda kuvela ngenxa yokuthuthukiswa kobuchwepheshe obusha. Futhi ukuthi ikhompuyutha, i-inthanethi, neqiniso elibonakalayo, okwangempela okungathandwa kwabathelisi esikubona noma ubuchwepheshe bezinto ezingokoqobo ezixubile nakho kushintshe indlela edlalwa ngayo imidlalo yebhodi. A isizukulwane esisha semidlalo yebhodi kubantu abadala sebefikile, futhi kufanele wazi la maphrojekthi athokozisayo:
Imidlalo yebhodi ye-inthanethi nezinhlelo zokusebenza
Kunemidlalo eminingana yebhodi ye-inthanethi ongayidlala nomndeni wakho noma abangani ukude, kanye nezinye izinhlelo zokusebenza zeselula ezikuvumela ukuthi udlale ezakudala kumodi yabadlali abaningi noma ngokumelene nomshini. Ungakwazi ukusesha i-Google Play ne-App Store ezitolo.
Amanye amakhasi ewebhu nge amajusi wetafula mahhala Yilezi:
Ibhodi Yomdlalo Webhodi
Imidlalo engokoqobo engathandwayo
Ungawubona ngeso lengqondo umdlalo webhodi lapho ungaphinda udale inqwaba yemidlalo ehlukene, nalapho ungabona khona izinto zokwakha nezinto ngezinhlangothi ezintathu, nalapho amathayela engewona amathayela, kodwa aphile futhi abe amaqhawe, izilo, izilwane, njll. .? Awu, yeka ukucabanga, lokho kakade lapha sibonga ukungathandwa kwabathelisi esikubona ngokoqobo izibuko kanye ibizwa ngokuthi Tilt Five.
Ezinye ze ukungabaza okuvame kakhulu futhi imibuzo evame ukubuzwa mayelana nemidlalo yebhodi yabantu abadala yilena elandelayo:
Iyini imidlalo yebhodi yabantu abadala?
Lena imidlalo yebhodi evamise ukuba netimu engabafanele abancane, nakuba kungesiyo yonke. Futhi akudingekile ukuthi kube ngenxa yokuthi banokuqukethwe okufanele abantu abadala, kodwa ngoba zenzelwe abantu abadala, ngakho-ke kungenzeka ukuthi abancane abasendlini abazi ukuthi badlala kanjani noma banesithukuthezi.
Kungani uthenga lolu hlobo lokuzijabulisa?
Ngakolunye uhlangothi, noma nini lapho umdlalo udlalwa nomndeni noma abangani, isikhathi esihle sichithwa, futhi ukuhleka kuqinisekisiwe. Futhi, manje ngesimo sobhubhane kungaba uhlelo oluhle futhi oluphephile ukubloma. Ngakolunye uhlangothi, ziphinde zikusize ukuthi uhlangane nabantu abaningi futhi ubalekele esikrinini se-PC noma ikhonsoli yegeyimu, okuvamise ukuba yimidlalo ekhuthaza ukuba abantu ngabanye kanye nokuzihlukanisa. Okuhluke ngokuphelele kwemidlalo yebhodi yakudala, eseduze. Ungakwazi ngisho nokuyithatha njengesipho esihle sikaKhisimusi, noma nganoma yiluphi olunye usuku.
Kunezitolo eziningi ezikhethekile zokuthenga imidlalo yebhodi, kanye nezitolo zamathoyizi ezihlanganisa nalolu hlobo lwemidlalo yabantu abadala. Kodwa-ke, enye yezinketho ezinhle kakhulu ukuthenga ku-inthanethi kumapulatifomu afana ne-Amazon, njengoba unenani elikhulu lemidlalo okungenzeka ukuthi ngeke uyithole kuzo zonke izitolo. Ngaphezu kwalokho, kunezinhlobonhlobo zezintengo kanye namaphromoshini ezikhathi ezithile ongawasebenzisa ngokunenzuzo.
Indlela ephelele ye-athikili: Nginike isikhathi sokuphumula » General » Imidlalo yebhodi engcono kakhulu yabantu abadala